၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်အဆင့် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်အဆင့်
ဤဆောင်းပါးသည် လက်ရှိကျင်းပနေသော အားကစားနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် ပြိုင်ပွဲအား မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေမှုပေါ်မူတည်ပြီး အချက်အလက်များ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ ကနဦးသတင်းတင်ပြချက်များ၊ ရမှတ်များ သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် စိတ်ချယုံကြည်ဖွယ်မရှိသော အချက်အလက်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၏ နောက်ဆုံးတည်ဖြတ်မှုသည် လက်ရှိနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ဦးမည် မဟုတ်ပေ။ (July 2018) (ဤတမ်းပလိတ်စာသားကို မည်သို့ ဖယ်ရှားမည်ဆိုသည်ကို လေ့လာရန်)
၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား၏ ရှုံးထွက်အဆင့်ပြိုင်ပွဲများကို အုပ်စုအဆင့်ပြိုင်ပွဲများ ပြီးဆုံးသည်နှင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲများကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၁၆ သင်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲများဖြင့်စတင်ကစားမည်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မော်စကိုမြို့၊ လုရှ်နီးကီ အားကစားကွင်းကြီးတွင် ဗိုလ်လုပွဲကန်ပြီးနောက် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ အုပ်စုအသီးသီးမှ ထိပ်ဆုံးအသင်း ၂ သင်းသည် ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ ဝင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ တတိယလုပွဲကို ဆီမီးဖိုင်နယ် ရှုံးသော အသင်း ၂ သင်းဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဤပွဲစဉ်ဇယားများရှိ အချိန်များကို ဒေသစံတော်ချိန်အား အသုံးပြုထားသည်။
၂ ဝင်ခွင့်ရသော အသင်းများ
၄ ၁၆ သင်းအဆင့်
၄.၁ ပြင်သစ် vs အာဂျင်တီးနား
၄.၂ ဥရုဂွေး vs ပေါ်တူဂီ
၄.၃ စပိန် vs ရုရှား
၄.၄ ခရိုအေးရှား ပထမ vs ဒိန်းမတ်
၄.၅ ဘရာဇီး vs မက္ကဆီကို
၄.၆ ဘယ်လ်ဂျီယမ် vs ဂျပန်
၄.၇ ဆွီဒင် vs ဆွစ်ဇာလန်
၄.၈ ကိုလံဘီယာ vs အင်္ဂလန်
၅.၁ ဥရုဂွေး vs ပြင်သစ်
၅.၂ ဘရာဇီး vs ဘယ်လ်ဂျီယမ်
၅.၃ ဆွီဒင် vs အင်္ဂလန်
၅.၄ ရုရှား vs ခရိုအေးရှား
၆.၁ ပြင်သစ် vs ဘယ်လ်ဂျီယမ်
၆.၂ ခရိုအေးရှား vs အင်္ဂလန်
ရှုံးထွက်အဆင့်တွင် ကစားပွဲ၏ ပုံမှန်ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် ၉၀ ပြီးသည်အထိ ရလဒ်တူညီနေပါက အချိန်ပိုကို ၁၅ မိနစ်စီ နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ကန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုအတွင်း တစ်သင်းစီမှ လူ ၄ နေရာအထိ အစားထိုးလှဲလှယ်နိုင်သည်။ အချိန်ပိုကန်ပြီးသွားသည့်အချိန်တွင်ပင် ရလဒ်ထပ်မံတူညီနေပါက ပင်နယ်တီကန်၍ အနိုင်ရရှိသူကို ဆုံးဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
အုပ်စု ၈ ခုမှ ထိပ်ဆုံးအသင်း ၂ သင်းသည် ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 
ဇွန် ၃၀ – ဆိုချီ
ဇူလိုင် ၆ – ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂေါရတ်
ဇွန် ၃၀ – ကာဇန်
ဇူလိုင် ၁၀ – စိန့်ပီတာစဘတ်
ဇူလိုင် ၂ – ဆာမာရာ
ဇူလိုင် ၆ – ကာဇန်
ဇူလိုင် ၂ – ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူ
ဇူလိုင် ၁၅ – မော်စကို (လုရှ်နီးကီ)
ဇူလိုင် ၁ – မော်စကို (လုရှ်နီးကီ)
စပိန် ၁ (၃)
ဇူလိုင် ၇ – ဆိုချီ
ရုရှား (p) ၁ (၄)
ရုရှား ၂ (၃)
ဇူလိုင် ၁ – ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂေါရတ်
ခရိုအေးရှား ၂ (၄)
ခရိုအေးရှား (p) ၁ (၃)
ဇူလိုင် ၁၁ – မော်စကို (လုရှ်နီးကီ)
ဒိန်းမတ် ၁ (၂)
ခရိုအေးရှား (a.e.t.) ၂
ဇူလိုင် ၃ – စိန့်ပီတာစဘတ်
အင်္ဂလန် ၁ Third place play-off
ဇူလိုင် ၇ – ဆာမာရာ ဇူလိုင် ၁၄ – စိန့်ပီတာစဘတ်
ဆွီဒင် ၀ ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၄
ဇူလိုင် ၃ – မော်စကို (အခရိကျီယာ)
အင်္ဂလန် ၂ အင်္ဂလန် ၂
ကိုလံဘီယာ ၁ (၃)
အင်္ဂလန် (p) ၁ (၄)
ပြင်သစ် vs အာဂျင်တီးနား[ပြင်ဆင်ရန်]
၃၀ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၃၀)
၁၇:၀၀ MSK (UTC+3)
ကာဇန် အရီနာ၊ ကာဇန်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 42,873 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Alireza Faghani (အီရန်)
CF 10 လီယွန်နယ် မက်ဆီ (c)
Kylian Mbappé (ပြင်သစ်)
Reza Sokhandan (အီရန်)
Mohammadreza Mansouri (အီရန်)
Julio Bascuñán (ချီလီ)
Christian Schiemann (ချီလီ)
Massimiliano Irrati (အီတလီ)
Paweł Gil (ပိုလန်)
Carlos Astroza (ချီလီ)
Paolo Valeri (အီတလီ)
ဥရုဂွေး vs ပေါ်တူဂီ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၁:၀၀ MSK (UTC+3)
ဖစ်ရှ် အိုလံပစ် အားကစားကွင်း၊ ဆိုချီမြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၄,၂၈၇ ဦး
CF7ခရစ်စတီးယားနို ရော်နယ်လ်ဒို (c) 90+3'
Edinson Cavani (ဥရုဂွေး)
Marvin Torrentera (မက္ကဆီကို)
Miguel Hernández (မက္ကဆီကို)
Jair Marrufo (အမေရိကန်)
Corey Rockwell (Uအမေရိကန်)
Mark Geiger (အမေရိကန်)
Bastian Dankert (ဂျာမနီ)
Joe Fletcher (ကနေဒါ)
Danny Makkelie (နယ်သာလန်)
စပိန် vs ရုရှား[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၀၁)
လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်း၊ မော်စကိုမြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၇၈,၀၁၁ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Björn Kuipers (Netherlands)
Ignashevich 12' (o.g.)
Igor Akinfeev (ရုရှား)
Sander van Roekel (နယ်သာလန်)
Erwin Zeinstra (နယ်သာလန်)
Clément Turpin (ပြင်သစ်)
Nicolas Danos (ပြင်သစ်)
Mark Borsch (ဂျာမနီ)
Felix Zwayer (ဂျာမနီ)
ခရိုအေးရှား ပထမ vs ဒိန်းမတ်[ပြင်ဆင်ရန်]
ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂေါရတ် အားကစားကွင်း, ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂေါရတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၀,၈၅၁ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Néstor Pitana (အာဂျင်တီးနား)
CB4Simon Kjær (c)
Kasper Schmeichel (ဒိန်းမတ်)
Hernán Maidana (အာဂျင်တီးနား)
Juan Pablo Bellati (အာဂျင်တီးနား)
Enrique Cáceres (ပါရာဂွေး)
Eduardo Cardozo (ပါရာဂွေး)
Mauro Vigliano (အာဂျင်တီးနား)
Gery Vargas (ဘိုလီဗီယား)
Roberto Díaz Pérez (စပိန်)
Daniele Orsato (အီတလီ)
ဘရာဇီး vs မက္ကဆီကို[ပြင်ဆင်ရန်]
၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၀၂)
၁၈:၀၀ SAMT (UTC+4)
ကော့စမော့ အရီနာ၊ ဆာမာရာမြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 41,970 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Gianluca Rocchi (အီတလီ)
CM4Rafael Márquez (c) 46'
Elenito Di Liberatore (အီတလီ)
Mauro Tonolini (အီတလီ)
Antonio Mateu Lahoz (စပိန်)
Pau Cebrián Devís (စပိန်)
ဘယ်လ်ဂျီယမ် vs ဂျပန်[ပြင်ဆင်ရန်]
Belgium cornerback Jan Vertonghen in possession of the ball during the match.
ရပ်စတော့ဗ် အရီနာ၊ ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူမြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၁,၄၆၆ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Malang Diedhiou (ဆီနီဂေါ)
Eden Hazard (ဘယ်လ်ဂျီယမ်)
Djibril Camara (ဆီနီဂေါ)
El Hadji Samba (ဆီနီဂေါ)
Bakary Gassama (ဂမ်ဘီးယား)
Jean Claude Birumushahu (ဘူရွန်ဒီ)
ဆွီဒင် vs ဆွစ်ဇာလန်[ပြင်ဆင်ရန်]
Marcus Berg (left) attempts to take possession of the ball away from Johan Djourou (right).
၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၀၃)
ကရဲံစတော့ဗ်စကီး အားကစားကွင်း၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၆၄,၀၄၂ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Damir Skomina (ဆလိုဗေးနီးယား)
CB4Andreas Granqvist (c)
CM 11 Valon Behrami (c) 61'
Emil Forsberg (ဆွီဒင်)
Jure Praprotnik (ဆလိုဗေးနီးယား)
Robert Vukan (ဆလိုဗေးနီးယား)
Nawaf Shukralla (ဘာရိန်း)
Yaser Tulefat (ဘာရိန်း)
ကိုလံဘီယာ vs အင်္ဂလန်[ပြင်ဆင်ရန်]
Eric Dier scores the winning goal in England's first World Cup penalty shoot-out victory, having lost thrice before.
အာခရိကျီယာ အရီနာ၊ မော်စကိုမြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၄,၁၉၀ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Mark Geiger (အမေရိကန်)
CF9Radamel Falcao (c) 63'
CF9Harry Kane (c)
Harry Kane (အင်္ဂလန်)
Frank Anderson (အမေရိကန်)
Matthew Conger (နယူးဇီလန်)
Tevita Makasini (တုန်ဂါ)
ဥရုဂွေး vs ပြင်သစ်[ပြင်ဆင်ရန်]
၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၀၆)
ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ် အားကစားကွင်း၊ ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၃,၃၁၉ ဦး
Antoine Griezmann (ပြင်သစ်)
Juan Pablo Belatti (အာဂျင်တီးနား)
Alireza Faghani (အီရန်)
ဘရာဇီး vs ဘယ်လ်ဂျီယမ်[ပြင်ဆင်ရန်]
Belgium forward Kevin De Bruyne celebrating after the conclusion of the match.
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၂,၈၇၃ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Milorad Mažić (ဆားဘီးယား)
en:Renato Augusto 76'
Fernandinho 13' (o.g.)
Kevin De Bruyne (ဘယ်လ်ဂျီယမ်)
Milovan Ristić (ဆားဘီးယား)
Dalibor Đurđević (ဆားဘီးယား)
Corey Rockwell (အမေရိကန်)
ဆွီဒင် vs အင်္ဂလန်[ပြင်ဆင်ရန်]
၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၀၇)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၉,၉၉၁ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Björn Kuipers (နယ်သာလန်)
Jordan Pickford (အင်္ဂလန်)
ရုရှား vs ခရိုအေးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]
Mario Mandžukić (left) makesacross to Andrej Kramarić (off screen to right), who would then head the ball into the goal to equalise in the 39th minute.
ဒိုင်လူကြီး: Sandro Ricci (ဘရာဇီး)
CM 10 Luka Modrić (c)
Luka Modrić (ခရိုအေးရှား)
Emerson de Carvalho (ဘရာဇီး)
Marcelo Van Gasse (ဘရာဇီး)
Janny Sikazwe (ဇမ်ဘီးယား)
Jerson Dos Santos (အန်ဂိုလာ)
Wilton Sampaio (ဘရာဇီး)
ပြင်သစ် vs ဘယ်လ်ဂျီယမ်[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၁၀)
ကရဲ့စတော့ဗ်စကီး အားကစားကွင်း, စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၆၄,၂၈၆ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Andrés Cunha (ဥရုဂွေး)
MF 15 Steven Nzonzi 85'
CF 10 Eden Hazard (c) 63'
Samuel Umtiti (ပြင်သစ်)
Nicolás Tarán (ဥရုဂွေး)
Mauricio Espinosa (ဥရုဂွေး)
César Arturo Ramos (မက္ကဆီကို)
ခရိုအေးရှား vs အင်္ဂလန်[ပြင်ဆင်ရန်]
The Croatian team and their supporters celebrate after Ivan Perišić's equalising goal in the 68th minute.
၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၁၁)
ဒိုင်လူကြီး: Cüneyt Çakır (တူရကီ)
AM 10 Luka Modrić (c) 119'
Ivan Perišić (ခရိုအေးရှား)
Bahattin Duran (တူရကီ)
Tarık Ongun (တူရကီ)
Björn Kuipers (နယ်သာလန်)
၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၇-၁၄)
ကရဲ့စတော့ဗ်စကီး အားကစားကွင်း၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၆၄,၄၄၀၆ ဦး
Malang Diedhiou (ဆီနီဂေါ)
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ
၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ
↑ ၁.၀ ၁.၁ FIFA World Cup Russia 2018 – Match Schedule။ FIFA.com (20 December 2017)။ 28 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Regulations – 2018 FIFA World Cup Russia။ FIFA.com။ 12 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Match report – Round of 16 – France v Argentina (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (30 June 2018)။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – France v Argentina (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (30 June 2018)။
↑ France v Argentina – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (30 June 2018)။
↑ Match report – Round of 16 – Uruguay v Portugal (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (30 June 2018)။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Uruguay v Portugal (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (30 June 2018)။
↑ Uruguay v Portugal – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (30 June 2018)။
↑ Match report – Round of 16 – Spain v Russia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (1 July 2018)။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Spain v Russia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (1 July 2018)။
↑ Spain v Russia – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (1 July 2018)။
↑ Match report – Round of 16 – Croatia v Denmark (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (1 July 2018)။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ ၁၃.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Croatia v Denmark (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (1 July 2018)။
↑ Croatia v Denmark – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (1 July 2018)။
↑ Match report – Round of 16 – Brazil v Mexico (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (2 July 2018)။ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Brazil v Mexico (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (2 July 2018)။ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Brazil v Mexico – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Round of 16 – Belgium v Japan (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ ၁၉.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Belgium v Japan (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Belgium v Japan – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Round of 16 – Sweden v Switzerland (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ ၂၂.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Sweden v Switzerland (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Sweden v Switzerland – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Round of 16 – Colombia v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ ၂၅.၂ Tactical Line-up – Round of 16 – Colombia v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Colombia v England – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Quarter-final – Uruguay v France (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ ၂၈.၂ Tactical Line-up – Quarter-final – Uruguay v France (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Uruguay v France – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Quarter-final – Brazil v Belgium (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ ၃၁.၂ Tactical Line-up – Quarter-final – Brazil v Belgium (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Brazil v Belgium – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Quarter-final – Sweden v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ ၃၄.၂ Tactical Line-up – Quarter-final – Sweden v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Sweden v England – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Quarter-final – Russia v Croatia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၃၇.၀ ၃၇.၁ ၃၇.၂ Tactical Line-up – Quarter-final – Russia v Croatia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Russia v Croatia – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Semi-final – France v Belgium (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ ၄၀.၂ Tactical Line-up – Semi-final – France v Belgium (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ France v Belgium – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Semi-final – Croatia v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ ၄၃.၀ ၄၃.၁ ၄၃.၂ Tactical Line-up – Semi-final – Croatia v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ Croatia v England – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Play-off for third place – Belgium v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ ၄၆.၀ ၄၆.၁ ၄၆.၂ Tactical Line-up – Play-off for third place – Belgium v England (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
↑ Belgium v England – Man of the Match။ Fédération Internationale de Football Association (၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၈)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၈_ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား_ရှုံးထွက်အဆင့်&oldid=627328" မှ ရယူရန်
ကာကွယ်မှုတမ်းပလိတ် မှားယွင်းနေသော ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။